ခပ်ဟော့ဟော့အင်္ကျီတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘရာအမျိုးအစား (၃) မျိုး -
ဘယ်လောက်ဟော့တဲ့အင်္ကျီဝတ်ဝတ် ဘရာအရွေးမှားရင်တော့ ဂွမ်းနေဦးမှာပဲနော် 🤕
ယောင်းတို့ရေ … အင်္ကျီဟော့ဟော့လေးတစ်ထည်ကို ဝတ်ချင်ပေမဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဘရာမရှိလို့ စိတ်ညစ်ရတာတွေ ကြုံဖူးကြလား ? အရာတွေထင်နေတာ၊ ကြိုးတွေပေါ်နေတာ၊ ကျောဗြောင်အင်္ကျီတွေဝတ်ရင် အနောက်မှာဘရာကိုမြင်နေရတာစသဖြင့် မျိုးစုံကြိုးခုန်နေတာပဲ။ Stella ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ပြဿနာနဲ့တော်တော်တိုင်ပတ်လို့ ဘာလုပ်ရမလဲ အဖြေရှာတဲ့အခါမှာ သိလာတာသမျှအကုန်လုံး ယောင်းတို့ကို ဖောက်သည်ချပေးပါဦးမယ်။
တစ်ချို့လည်ပင်းအဟိုက်အင်္ကျီတွေက တော်တော်ကြီးကိုဟိုက်တာမျိုးယောင်းတို့ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆယ်လီဘရစ်တီတွေ အဲ့လိုအင်္ကျီမျိုးဝတ်တာမြင်တော့ ဟယ် သူတို့ကျတော့ ဘာဘရာကြိုးမှလဲ မမြင်ရဘူးဆိုပြီး ရှာဖွေကြည့်တော့မှ အလယ်မှာ U ပုံစံရှိတဲ့ ဘရာလေးတွေနဲ့ ဝတ်ရမှန်းသိတာပါ။ ဒီလိုဘရာမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဝယ်သာဝယ်လိုက်ပါနော်။
Related article >>> ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရုံးတက်ဖက်ရှင်အတွဲအစပ် (၃) ခု
ရင်ပြတ်အင်္ကျီတွေ၊ Off Shoulder အင်္ကျီတွေနဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းအင်္ကျီတွေ ဝတ်တဲ့အခါ ဘရာကြိုးတွေပေါ်နေရင်ဘယ်လိုမှ ကြည့်မလှပါဘူး။ အဲ့လိုအင်္ကျီတွေအတွက် ယောင်းမှာရှိသင့်တာကတော့ Strapless Bra ပါ။ Strapless Bra တွေမှာ ကြိုးလုံးဝမပါဘဲ ယောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်သားတည်းကျနေစေတာမို့ ကျွတ်ကျမှာတွေဘာတွေလည်း စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ကျောပြောင်အင်္ကျီတွေ ဝတ်တော့မယ်ဆိုရင် နောက်ကျောမှာ ဘရာအပြားလိုက်ကြီးပေါ်နေလို့ ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောအလှကို မဖော်ပြနိုင်ဘဲ အပေါ်ကထပ်ဝတ်ရတာမျိုး၊ တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့ အင်္ကျီလှလှလေးကိုတောင် ဗီရိုထဲပြန်သိမ်းလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်မှတ်လား ? Invisible bra နဲ့သာဆိုရင် ဒါတွေလုံးဝဖြစ်မလာတော့ပါဘူး။ Invisible bra တော်တော်များများက ကပ်ခွာပုံစံဖြစ်ပြီး ယောင်းရဲ့ရင်သားမှာကပ်နေမှာဖြစ်လို့ လုံးဝမကွာကျပါဘူး။
Related article >>> ဒေါက်ဖိနပ်လှလှလေးတွေကို ဆိုဒ်မှန်မှန်ရွေးကြမယ်
ခပ်ဟော့ဟော့အဝတ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိတဲ့ဘရာတွေ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပြီး အမြဲယုံကြည်မှုရှိရှိလှနိုင်ကြပါစေနော်။
ဘယျလောကျဟော့တဲ့အင်ျကြီဝတျဝတျ ဘရာအရှေးမှားရငျတော့ ဂှမျးနဦေးမှာပဲနျော 🤕
ယောငျးတို့ရေ … အင်ျကြီလှလှလေးတဈထညျကို ဝတျခငျြပမေဲ့ ကိုကျညီတဲ့ဘရာမရှိလို့ စိတျညဈရတာတှေ ကွုံဖူးကွလား ? အရာတှထေငျနတော၊ ကွိုးတှပေျေါနတော၊ ကြောဗွောငျအင်ျကြီတှဝေတျရငျ အနောကျမှာဘရာကိုမွငျနရေတာစသဖွငျ့ မြိုးစုံကွိုးခုနျနတောပါပဲ။ Stella ကိုယျတိုငျလညျး အဲ့ဒီပွဿနာနဲ့တျောတျောတိုငျပတျလို့ ဘာလုပျရမလဲ အဖွရှောတဲ့အခါမှာ သိလာတာမှနျသမြှအကုနျလုံး ယောငျးတို့ကို ဖောကျသညျခပြေးပါဦးမယျ။
တဈခြို့လညျပငျးအဟိုကျအင်ျကြီတှကေ တျောတျောကွီးကိုဟိုကျတာမြိုးယောငျးတို့ ကွုံဖူးကွမယျထငျပါတယျ။ ဆယျလီဘရဈတီတှေ အဲ့လိုအင်ျကြီမြိုးဝတျတာမွငျတော့ ဟယျ သူတို့ကတြော့ ဘာဘရာကွိုးမှလဲ မမွငျရဘူးဆိုပွီး ရှာဖှကွေညျ့တော့မှ အလယျမှာ U ပုံစံရှိတဲ့ ဘရာလေးတှနေဲ့ ဝတျရမှနျးသိတာပါ။ ဒီလိုဘရာမြိုးတှရေ့ငျတော့ ဝယျသာဝယျလိုကျပါနျော။
ရငျပွတျအင်ျကြီတှေ၊ Off Shoulder အင်ျကြီတှနေဲ့ ကွိုးတဈခြောငျးအင်ျကြီတှေ ဝတျတဲ့အခါ ဘရာကွိုးတှပေျေါနရေငျဘယျလိုမှ ကွညျ့မလှပါဘူး။ အဲ့လိုအင်ျကြီတှအေတှကျ ယောငျးမှာရှိသငျ့တာကတော့ Strapless Bra ပါ။ Strapless Bra တှမှော ကွိုးလုံးဝမပါဘဲ ယောငျးရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာ တဈသားတညျးကနြစေတောမို့ ကြှတျကမြှာတှဘောတှလေညျး စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
ကြောပွောငျအင်ျကြီတှေ ဝတျတော့မယျဆိုရငျ နောကျကြောမှာ ဘရာအပွားလိုကျကွီးပျေါနလေို့ ကိုယျ့ရဲ့နောကျကြောအလှကို မဖျောပွနိုငျဘဲ အပျေါကထပျဝတျရတာမြိုး၊ တဈခါတဈလကေိုယျဝတျခငျြတဲ့ အင်ျကြီလှလှလေးကိုတောငျ ဗီရိုထဲပွနျသိမျးလိုကျရတာမြိုးရှိတယျမှတျလား ? Invisible bra နဲ့သာဆိုရငျ ဒါတှလေုံးဝဖွဈမလာတော့ပါဘူး။ Invisible bra တျောတျောမြားမြားက ကပျခှာပုံစံဖွဈပွီး ယောငျးရဲ့ရငျသားမှာကပျနမှောဖွဈလို့ လုံးဝမကှာကပြါဘူး။
ခပျဟော့ဟော့အဝတျအစားနဲ့ လိုကျဖကျမှုရှိတဲ့ဘရာတှေ ရှေးခယျြဝတျဆငျပွီး အမွဲယုံကွညျမှုရှိရှိလှနိုငျကွပါစနေျော။
Tagged bra, Fashion, lingerie, tips, underwear, women
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်တိုင်း ဖက်ရှင်ကျဖို့ သတိထားရမယ့် အချက် (၅) ချက်
Posted on August 18, 2017 Author Akari
ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ မလိုက်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး…ကိုယ်ဝတ်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်..။
Posted on March 6, 2019 March 6, 2019 Author Stella
ဒေါက်ဖိနပ်စီးတိုင်း ခြေထောက်နာတာ ဇက်ကြောတက်တာတွေ ဖြစ်နေလား ?
Posted on August 7, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဖတ်သင့်ပါတယ် တရုတ်မင်္ဂလာဆောင်တွေ တက်ချင်ရင်ပေါ့ 😛